एन्ड्रोइड मोबाइलमा नेपालीलाई काम लाग्ने एप्लिकेसनहरु – Nepali Tech Blog
Home → मोबाइल
अब त हात हातमा मोबाइल, त्यो पनि स्मार्ट फोन । कसले किनोस् र बोकोस् अब औँला दुख्ने गरि थिचेर चलाउँनु पर्ने मोबाइल । चट्ट छोयो, काम बन्यो । त्यसमा पनि एन्ड्रोइडले त धेरै नेपाली मन लुटेको छ । आफुले चाहेको एप राखेर चलाउँन पाउँनु कम रमाइलो पनि त हैन नि । क्यान्ड्रि क्रस होस् कि टेम्पल रन, क्लास अफ क्लान नै किन नहोस्, दिनमा केहि बेर त गेममा नरमाए त कस्तो कस्तो लाग्ने ।
हामी धेरैलाई धेरै थाहा छ एपहरुका बारेमा । थामिनसक्नु एपहरु मोबाइलमा भरेको त मैले नि देखेको छु । तर कतिजना जान्नु हुन्न अनि कतिका आँखामा परेकै हुन्न राम्रा र उपयोगी एप पनि । यसैले यो पोस्ट तिनै लुकेर बसेका एपहरुका लागि र जसले यस्तै एपहरु खोजिरहनु भएको छ उहाँहरुका लागि ।
यहाँ १ नम्बरमा लेखिएको एप चै अति नै उपयोगी र पछिल्ला नम्बरमा भएका कम उपयोगी भन्ने अर्थ लाग्दैनन् है । स्कुल हो र, जान्ने र राम्रा चै अघि बस्न ? डाउनलोड गर्न नाममा क्लिक गर्नुहोस् है ।
१. हाम्रो किबोर्ड : एन्ड्रोइड मोबाइलमा नेपालीमा लेख्नका लागि अति नै उपयोगी एप हो यो । यसमा तपाईले रोमन युनिकोडमा टाइप गर्नुसक्नुहुन्छ । जस्तै ram लेख्नु राम भएर आउनेछ । तपाईले यसलाई कपि पेस्ट गर्नै पर्दैन । जहाँ लेख्नु पर्ने हो सोझै त्यही लेखिन्छ । मलाई धेरैले फेसबुकमा कसरी नेपालीमा लेख्ने मोबाइलदेखि भनेर दिक्क पारेकाले यसलाई सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा लेखेको हो । के थाहा, तलसम्म कसैले नपढ्ने हो कि ।
अपडेट : यो एप स्टोरबाट १० लाखपटक भन्दा धेरै डाउनलोड भइसकेको छ ।
२. खबर सञ्चार : यो एप मलाई गजब राम्रो लाग्छ । नेपालका गन्नेमान्ने समाचार साइटका समाचारहरु यसमा पढ्न सकिन्छ । एपमा क्लिक गर्दा पहिले छोटो समाचार र पछि लिंकमा क्लिक गरेपछि सोही समाचार पुरा पढ्न पाइन्छ । बेग्लै ब्राउजर नखुली त्यसमै खुल्ने भएकाले छिटो र सहज छ ।
अपडेट : धोका दिए भन्नुस् । यो एप अहिले एप स्टोरमा पाइदैन ।
३. नेपाली क्यालेन्डर (पात्रो): यो त झन् नेपालीहरुको लागि एन्ड्रोइडमा शान नै हो । चट्ट मेन पेजमा राख्यो भने यसले वालपेपर पनि छोप्दैन । पारदर्शी छ । यसमा नेपाली पात्रोको साथसाथै नेपाली एफएमहरु, विनिमय दर, सुनचाँदीको भाउ, राशिफल, नेपाली अंग्रेजी शब्दकोष तथा नेपाली अंग्रेजी मिति परिवर्तन जस्ता अन्य सुविधाहरु पनि राखिएको हुन्छ ।
४. नेपाली डिक्सनेरी – अफलाइन : यो अफलाइन नेपाली अंग्रेजी डिक्सनेरी हो । अफलाइन भन्नुको अर्थ एक पटक मोबाइलमा राखिसकेपछि प्रयोग गर्नलाई इन्टरनेट चाहिदैन । यसमा नेपाली शब्दबाट अंग्रेजीमा र अंग्रेजीबाट नेपालीमा अर्थहरु हेर्न सकिन्छ ।
५. नेपाली शब्दकोश : यसमा नेपाली शब्दका अर्थका साथै उखान टुक्काहरु पनि छन् । तर यो अफलाइन चलाउँन सकिदैन । यसलाई प्रयोग गर्नका लागि इन्टरनेट जोडिएको हुनु पर्छ ।
६. रमाइलो नेपाली एप : अरे हो मुइया, यसरी बाटामा नहेर न, जब नजर ठोकिन्छ, ब्रेक नलाई गाडी रोकिन्छ । यो ट्रक साहित्य भनेर चिनिने नेपाली सडक साहित्य हो । रमाइलो नेपाली एपमा यस्ता सडक साहित्यसँगै उखान टुक्का, गाउँखाने कथा, रिमिक्स उखान, फलानो भनेको त यस्तो पो हुनु पर्छ त, थेगो, दशै तिहार एसएमएस तथा नेपाली सायरी लगायतको मज्जा लिन पाइन्छ । जहाँ जे हेरिरहेको भएपनि तुरुन्तै नेपाली युनिकोडमा लेख्न पाउँनु अर्को मज्जा हो यसको । जस्तै, अघिको सडक साहित्य पढ्दा रमाइलो लाग्यो अनि अगाडी र पछाडी केहि नेपालीमा थपथाप गरेर फेसबुकमा राख्नु पर्यो भने यसैबाट तुरुन्त गर्न सकिन्छ । साच्चै रमाइलो नेपाली एप रहेछ ।
७. लोडसेडिङ : लेख्दै जाँदा लक्की नम्बर सातमा पर्यो हाम्रो अनलक्की लोडसेडिङ । यो एप भने राम्रो छ । लोडसेडिङको तालिका हेर्न मात्र हैन, यति बेला लोडसेडिङ हुन लाग्यो है भनेर सम्झाउँन अर्लाम पनि राख्न सकिन्छ ।
८. नेपाली एफएम रेडियो : यसमा १५० भन्दा बढि नेपाली एफएम रेडियोहरु सुन्न सकिने दाबी छ यो बनाउँनेको । हुन पनि निकै एफएमहरु मैले सुन्न खोज्दा बजेकै छन् । सबै एफएमहरु भने मैले ट्राइ गरेको छैन । भन्नै नपर्ला, यो प्रयोग गर्न भने इन्टरनेट चाहिन्छ । इन्टरनेट नभइ त भरे भोली बज्ने एफएम अगाडी नै कहाँबाट पाएर यसमा भर्नु र, हैन ?
सबै एपहरु मैले चलाएका छन् । खासमा मैले मेरो मोबाइलमा हेर्दै कुन कुन एपहरु रै छन् भनेर यहाँ लेख्दैछु । यी मेरो जानकारीमा आएका उपयोगी एपहरुको संग्रहमात्रै हो । यो भन्दा त अरु कति राम्रा छन् छन् भन्ने अधिकार तपाईसँग छदैछ । अल्छि नगरि आफुले प्रयोग गरेर मन परेका उपयोगी एपहरुको नाम मात्रै भएपनि कमेन्टमा लेख्नु भयो भने अरुलाई सजिलो नै हुनेछ । अझ भन्नुछ, नेपाली एपहरु बनाएर त्यसै वेवारिसे छोडिदिने कुलत नै छ डेभ्लपरहरुको । यसैले मैले यो पोस्ट लेखेको समयमा मज्जाले चल्ने एपहरु अपडेट गर्न डेभ्लपरले बिर्सिदिदा तपाईले डाउनलोड गर्दा त्यति उपयोगी नभएका पनि हुन सक्छन् । तै पनि एक पटक इन्स्टल गरिहेर्नु होला । धन्यवाद ।
best android apps for nepali do not miss latest एन्ड्रोइड
Bijay Yadav January 28, 2014 at 4:06 am
Nepali Date Converter र Nlocate पनि मलाई राम्रो यप्स मध्ये पर्छन।
ramesh July 6, 2015 at 10:17 pm
maile ta nepali type bhanda aru use maa xaina 🙂